Ubushushu bemvelo ngamaxesha onke bubukeka obuhle. Uninzi lwama-fashionistas lwanamhlanje luphupha lokuba neengubo zabo zokugqoka iingubo ezintle. Kodwa nangona iimveliso zobumnyama zanamhlanje, emva kwexesha zidinga ukubuyiswa, ngokukhethekileyo kwipayipi. Umbala unokuphela okanye ungafuna ukudala into emitsha ukusuka kumatshini aseburhulumenteni asetyenziswa ngaphambili. Siza kuthetha malunga nendlela yokuvuselela umbala woboya, kwaye wenze ngokwakho ekhaya. Uhlaziyo lwezixhobo
Ukuya emsebenzini, kufuneka ulungiselele izinto ezithile. Ingakumbi oku: ibhodi, i-lime slaked, i-alum kunye ne-vitriol yensimbi kunye ne-brush. Ukuphelisa ukubola, kufuneka usebenzise isisombululo samanzi, ityuwa, i-ammonia, i-soda kunye ne-detergent. Ukongeza, kubalulekile ukulungiselela upende. Le nto ingaba yintlanzi yeezinwele eziqhelekileyo okanye i-aerosol yepeyinti. Konke kuxhomekeke kukuphi uhlobo lobomvu omele ulupende kunye naluphi umbala ofuna ukuyifumana.
Ngaphambi kokuqala inkqubo yokudweba ubomvu, kufuneka ihlambulule kwangaphambili nayiphi na into engcolisayo, kuba ingenakuyithatha idayi, eya kubangela ukungcolisa ukungalingani.
Ukucoca uboya, kubalulekile ukusebenzisa isisombululo esikhethekileyo, kwiqondo lokushisa lika-35-38 ° C. Ukwenza oko, kufuneka uchithe i-20 grams yetyuwa, ama-2 amaconsi e-detergent, i-2 grams ye-soda kunye ne-2-3 gram ye-ammonia kwelinye ilitha lamanzi. Kwisisombululo esinjalo, iikhumba ziyancitshiswa malunga neyure eli-1, ngelixesha apho kufuneka zixutywe ngezikhathi ezithile. Emva kwemizuzu engama-60, ubomvu kufuneka bubekwe ngokucophelela kunye nokusebenzisa amanzi aqhelekileyo ahlambulukileyo, sukuma. Ngaloo ndlela, unokuqiniseka ukuba ubomvu bucoca ngokucoca ngokupheleleyo.
Ngoku kufuneka uhlambe ubomvu. Kule nto, isisombululo esinezilitha ezili-10 zamanzi, i-150 grams ye-alum, iigrimu ezingama-250 ze-vitriol kunye nesiqingatha kilogram ye-hydrated lime isetyenziswe. Lo mxube kufuneka usetyenziswe elukhumbeni ngebhayisiki ecocekileyo. Emva koko, shiya izikhumba zomile ngokuzeleyo, uze uzihluthise ngamanzi acocekileyo. Kaloku ukuba izinto zoboya zihlambulukile, ungaqala ukupenda.
Kwakhona, ukuba ufuna ukupenda iibhokhwe zobomvu ngokulinganayo, kufuneka uzinake ukucoceka kwabo, kwaye ulululwe ngononophelo ulusu kwiplani uze ulinyathele. Kule meko, ngaphantsi kwesikhumba kufuneka uphathwe nge-glycerin, ukuze kungabikho monakalo. Emva koko, sebenzisa upende, uze uhlambulule uze unqume ngokupheleleyo.
Ukuba ufuna ukupenda uboya be-fox, ngoko ungasebenzisa amathoni amnyama, kwaye ukuba ufuna ukubuyisela umbala wangaphambili kumlo, ngoko unokusebenzisa i-can for suede. Ngelo xesha, fakela upende kumgama we-60 cm, ukuze uboya budibene kuphela ngeengcebiso. Emva kokutshiza ipeyin, ubomvu kufuneka budibaniswe ngokukhawuleza ukwenzela ukuba iinwele zingabambeleli ndawonye.
Ukuze uhlaziye uboya bemvelo, ungasebenzisa idayi yeezinwele. Umphumo ngumbala ophezulu kwaye ukhanyisa kakhulu. Nangona kunjalo, kulufanelekile ukwazi ukuba emva kweenyanga ezi-8 upende luya kutshabalalisa okanye lususe, olubonisa ukuba ixesha lokupenda inwele kwakhona.
Ukuba ufuna ukukhanyisa ithoni yobomvu, musa ukuyipenda ngokukhawuleza. Into leyo kukuba isakhiwo soboya singabonisa iziphumo ezingalindelekanga. Ngoko ke kungcono ukuzama kwincinane yobhokhwe. Ukuba isiphumo sinelisekile, ngoko unokuqala ukudweba yonke imveliso.
Emva kokupenda, xa ubomvu bubomile, kufuneka usebenzise i-balm evamile kwizinwele zakho. Emva koko supha uze uyomise kwindawo yokushisa. Oku kuya kunika ubumnandi kwaye kubonakale kwimveliso entsha.
Yiyiphi into enobungozi yokubhema ihookah
Izikhumbuzo ezintle kunye nezipho zoNyaka omtsha
Iingcebiso zeeholide zasehlotyeni ngoJuni
Amakhowe enetyhefu akhangeleka njengotya kunye nendlela yokwahlula ngayo?
20 iingcinga ze-supersex
Iklabishi ishicilelwe "desyatiminutka"
Abantwana kunye nemidlalo: indlela yokufakela umntwana
I-crochet evulekile ye-napkin
I-Cancer iyisifo esiza kufa
I-Omelette ihamba ne ham kunye ne-arugula
Indlela yokuhlaziywa nokucoca umzimba wakho ekhaya
I-Halva evela kumbewu yelanga